မြောက်ဦးဒေသတွင် လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခများ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားပါက နိုင်ငံတကာ ကျူးကျော်စစ်များမှ က - Yangon Media Group
မြောက်ဦးဒေသတွင် လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခများ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားပါက နိုင်ငံတကာ ကျူးကျော်စစ်များမှ က
ရန်ကုန်၊ မေ ၃ဝ
ကမ္ဘာ့အမွေ အနှစ်စာရင်းတင်သွင်းမည့် မြောက် ဦးဒေသတွင် လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခ များဆက်လက်ဖြစ်ပွားပါက နိုင်ငံ တကာကျူးကျော်စစ်များမှ ကာ ကွယ်ပေးနိုင်မည့် ကမ္ဘာ့အမွေအ နှစ်မဖြစ်ဘဲ လွဲချော်သွားနိုင် ကြောင်း သိရသည်။ မြောက်ဦးအမွေအနှစ်ဒေသ ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်စာရင်း ဝင်ရောက် နိုင်ရန် သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှု ဝန်ကြီးဌာနက ဦးဆောင်ပြီး ဆောင် ရွက်လျက်ရှိသည်။
”မြောက်ဦးအမွေအနှစ်ဒေသကို ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်စာရင်းဝင် ဖို့ သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှု ဝန်ကြီးဌာနက ဆောင်ရွက်နေပါ တယ်။ ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်ဒေသဖြစ်ဖို့ ဆိုတာ အမြင့်ဆုံးကာကွယ်စောင့် ရှောက်မှုရဖို့ လိုတယ်ဆိုတဲ့နေရာ မှာ နိုင်ငံတကာကတောင်ကျူးကျော် ပြီးတော့ စစ်ဖြစ်လို့မရဘူးဆိုတော့ ပြည်တွင်းမှာလည်း စစ်ဖြစ်လို့မရ ပါဘူး။ အရှင်းလင်းဆုံးပြောရမယ်ဆို ရင်တော့ မြောက်ဦးမှာ လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေ ဆက်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်အဖြစ်ကနေ လွဲချော်သွားနိုင်ပါတယ်။ မရနိုင်ပါ ဘူး။ အဲဒါကြောင့်မို့ ကျွန်မတို့က အဘက်ဘက်ကကြိုးစားပြီးတော့ မြောက်ဦးဒေသမှာ စစ်မက်ငြိမ်းချမ်း ပြီးတော့ ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်စာရင်း ဝင်ရောက်နိုင်ဖို့အတွက် ရှေ့ဆက် ပြီး လုပ်ငန်းစဉ်များ လုပ်ဆောင်ဖို့ ကြိုးစားနေပါတယ်”ဟု ယူနက်စကိုမှ အမျိုးသားစီမံကိန်းအရာရှိ ဒေါ်ဥမ္မာ မျိုးက မေ ၂၈ ရက်တွင် ရန်ကုန် မြို့ရှိ ချက်ထရီယမ်ဟိုတယ်၌ပြု လုပ်သော Visit Nepal 2020 Beyond Lumini ပွဲတွင် မီဒီယာ များကို ပြောကြားခဲ့သည်။
မြောက်ဦးဒေသအား ကမ္ဘာ့ အမွေအနှစ်တင်သွင်းနိုင်ရန် ကမ္ဘာ့ အမွေအနှစ်ကော်မတီသို့ ၂ဝ၁၉ ခု နှစ် စက်တင်ဘာလတွင် အဆိုပြု လွှာမူကြမ်းတင်သွင်းရမည်ဖြစ်သည်။ မြောက်ဦး ရှေးဟောင်းသုတေ သနဌာနမှညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက် တာသန်းထိုက်က ”မြောက်ဦးအတွက် အဆိုပြုလွှာမူကြမ်းကို ၂ဝ၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလမှာ အပြီးသတ်တင် သွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ တင်သွင်းဖို့ ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်မှုတွေက ၇ဝရာ ခိုင်နှုန်းတော့ ပြီးစီးနေပြီဖြစ်ပါတယ်” ဟု ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ပြောသည်။
လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခများ ကြောင့် ယူနက်စကိုမှ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ မြောက်ဦးဒေသသို့ သွားရောက်ရန် ခက်ခဲခြင်းများဖြစ် ပွားခဲ့ဖူးကြောင်းနှင့် မြောက်ဦးဒေသ ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်တင်သွင်းနိုင်ရန် အဆိုပြုလွှာမူကြမ်းကို တင်သွင်းပြီး ပါက ၂ဝ၂ဝခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာ့အမွေ အနှစ်စာရင်းတင်သွင်းကာ ၂ဝ၂၁ ခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်စာရင်း ဝင်၊ မဝင် သိရှိရမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဖမ်းဝရမ်း ထုတ်ခံထားရသည့် ဦးဝီရသူကို ထောက်ခံပွဲ ရွှေတိဂုံစေတီတော် အောင်မြေတွင်ပြုလုပ်
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့် အိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ် ရှရီနရန္ဒရာမိုဒီ၏ ဒုတိယအကြိမ်
မြန်မာနိုင်ငံတွင် လူ ၁ဝဝ လျှင်၂ဝ သည် ပုံမှန်ထက် ဝဖြိုးနေ၊ အသက်တိုနိုင် ဟုဆို
မြန်မာနိုင်ငံကို သစ်သား ပန်းပုရုပ်တု အများဆုံး ပိုင်ဆိုင်သည့် နိုင်ငံအဖြစ် ကမ္ဘာ့ စံချိန်တ??
ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်ကို မကျေနပ်သော ဟွန်ဒူးရပ်စ်ပြည်သူများ ဆန္ဒပြ၊ လုံခြုံရေးများကြောင့် တစ်ဥ??
နေပြည်တော်ရှိ ဧရာဝတီ ဘဏ်ခွဲများမှ ငွေကျပ်သိန်း ၁၂ဝ ကို ခြောက်ကြိမ်ခွဲကာ လိမ်လည် ထုတ်ယူမှုဖြ?
တရုတ်က ကာကွယ်ရေးအသုံးစရိတ်ကို ၇ ဒသမ ၅ ရာခိုင်နှုန်းတိုးမြှင့်လိုက်ကြောင်း ကြေညာ ၊ ၂ဝ၁၈ ခုနှစ
ခန့်စည်သူ၊ အောင်ရဲလင်း၊ အိချောပို၊ ပက်ထရစ်ရှာတို့၏ ‘ကောင်းကင်တစ်ခု အလိုရှိသည်’ရုပ်ရှင် မကြ?
အာရှ ဂီတဖျော်ဖြေပွဲ ထိုင်းနိုင်ငံ ကော့စမွေ ကျွန်းတွင် သြဂုတ်လ၌ ကျင်းပမည်
မန္တလေးမြို့တွင် ပန်းချီဆရာမခြောက်ဦး စုပေါင်း၍ မဟာပန်းချီပြပွဲ ကျင်းပ